Ukuphupha ngesidenge Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Xa sizenza isidenge, sithetha ukuba asiyifumani le ngongoma kwaye sibonakala ngathi siziziyatha, sizizidenge, kwaye siyazingca. Kwixesha elidlulileyo, nangona kunjalo, imbono yesidenge yayingaphantsi: enyanisweni, yayisisidenge esikwisidenge saso, esasisongelwe ngamagama ahlekisayo kunye namazwi ahlekisayo, awayenokugxeka umlawuli ngokwahlukeneyo ngaphandle kokoyika isohlwayo.
Zombini ezi ntsingiselo zikwadlala indima ukuba isidenge, esikwabizwa ngokuba yijoker, sichazwa njengophawu lwephupha. Kananjalo kunokwenzeka ukuba ephupheni usisidenge ngokwakho okanye uyayibona. Kuzo zombini ezi meko, uphawu lwephupha lunokuthetha izinto ezahlukeneyo.
1 Umqondiso wephupha «osisiyolo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «osisiyatha» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha «osisiyatha» - ukutolikwa kokomoya
Umqondiso wephupha «osisiyolo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukubizwa ngokuba usisidenge okanye isilumko ayisiyonyani kwinyani yanamhlanje. Ukuba, ngokuchaseneyo, umntu uziguqula njengesidenge okanye i-harlequin ephupheni, uphawu lungatsalela ingqalelo kwinto yokuba umntu akabathathi abanye ngokupheleleyo. Ixhoba lidla ngokujonga abanye njengabangafanelekanga kwaye ababuthathaka.
Kwangelo xesha, ungathanda ukwenza uluvo lwakho lucace koontanga bakho ngokubaxelela uthotho okanye uhlekise. Iphupha lakho likucela ukuba uvume ezakho iimpazamo kwaye ungasoloko uvumela oogxa bakho kunye nabantu obaziyo babonakale besisiyatha. Ngaphandle koko, uya kugqiba wedwa kwaye ulahlekelwe ngabahlobo bakho bokugqibela.
Umbono osisiyatha lowo uchaphazelekayo ephupheni, nangona kunjalo, unokubhekisa ku ikamva elimnandi bhekisa kwaye uthembise inzuzo elungileyo. Ke ngoko, ngentsingiselo ngqo, iimeko zokuphila zephupha kufuneka zithathelwe ingqalelo, kunye nemeko yekhonkrithi yephupha.
Kuyafana ke nangamaphupha apho ubona isidenge. Kwelinye icala, uphawu lunokuba lukhona abantu abakhohlisayo yalatha kwaye ulumkise abo baphuphayo ukuba bangaweli kumaqhinga akho. Kwelinye icala, isidenge ngamanye amaxesha sibhekisa kukungazi kwakho izinto ezibalulekileyo. Kule meko, iqela elinomdla liphulukana nokubona okubalulekileyo kwaye liyityeshele imisebenzi yakhe.
Umqondiso wephupha «osisiyatha» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokombono wengqondo, isidenge sibhekisa kubuchule bakho ephupheni. Ixhoba linomntu okhethekileyo ukuqonda okuphezulu ngakumbi ngokubhekisele kubomi bobuchwephesha ngcamango ezilungileyo. Abanye basenokungakwazi oku ngeli xesha.
Iphupha akufuneki linikezele nangayiphi na indlela. Ekugqibeleni, izimvo zakho, kunye nokuzimisela kwakho, zikunceda ukuba ufezekise impumelelo enkulu. Isimboli yamaphupha "osidenge" kufuneka ikukhuthaze ukuba ungakhawulezi uphume.
Umqondiso wephupha «osisiyatha» - ukutolikwa kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, isidenge luphawu Ukuqonda. Eminye imiyalezo ayibonakali xa uyijonga kuqala. Umntu ochaphazelekayo kufuneka avuleleke kwiindlela ezintsha. Ngale ndlela uya kuqonda kwaye uqhubeke ngakumbi.